प्रधानमन्त्रीले तामझामका साथ उद्‍घाटन गरेको विद्युतीय बस चल्न नपाउँदै सम्झौता रद्द! - Gokarna News from Nepal
भैरहवा — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्‍घाटन गरेको विद्युतीय बस चल्न नपाउँदै सम्झौता रद्द हुने भएको छ। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई वातावरण प्रदुषण रहित बनाउने उद्देश्यले विद्युतीय बस सेवा ल्याउने सम्झौता भएको थियो ।
एशियाली विकास बैंक (एडिबी) अनुदान सहायतामा लुम्बिनी क्षेत्रमा ५ वटा विद्युतीय बस र ११ वटा विद्युतीय कार संचालन गर्ने योजना थियो। सोही अनुरुप पर्यटन मन्त्रालयले गाडी आपूर्ती गर्नका लागि बिवाईडी अटो ईन्डस्ट्रिज प्रालिसगँ सम्झौता गरेको थियो। तर, बिवाईडी कम्पनीले सम्झौता अनुसारको बस उपलब्ध नगराएपछि सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रियामा पुगेको संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिए।
‘हामीले सम्झौता अनुसारको गाडी मागेका थियौँ, त्यो अनुसार बिवाईडीले हामीलाई गाडी उपलब्ध गराएन’, उनले भने, ‘त्यसैले सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रियामा गरेका हौँ।’
करिब २८ करोडको लागतमा लुम्बिनीमा संचालन गर्नका लागि लुम्बिनी क्लिन पब्लिक ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट अन्र्तगत ल्याइएको उक्त विद्युतीय सवारी साधन निकै तामझामका साथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका थिए। तर, संचालनमा आउन नपाउँदै पर्यटन मन्त्रालय सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रियामा पुगेको छ।
बस आपूर्ती गर्ने कम्पनी विवाइडीलाई अझै भुक्तानी नदिइएको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए।
उनका अनुसार उपलब्ध गराइएको बसमा सम्झौता विपरीत १७ वटा ‘फल्ट’ भेटिएको थियो। बसमा भेटिएका फल्टहरुलाई परिवर्तन गर्न पटक पटक पत्राचार गरिए पनि विवाइडीले नमानेको उनको भनाइ छ। १७ वटा ‘फल्ट’ मध्ये अधिकांश स–साना कमजोरीहरु थिए।
‘बसमा सम्झौता अनुसारको पार्टपुर्जा राख्नका लागि धेरै पटक विवाइडी कम्पनीलाई पत्राचार गर्यौँ’, उनले दावी गर्दै भने, ‘फल्टहरु परिवर्तन गर्न समय लाग्छ भने त्यो पनि दिन्छौँ भन्यौँ तर कम्पनीले मानने।’
एडिबीको अनुदान सहायतामा लुम्बिनीमा संचालनका लागि ल्याइएको उक्त बस पर्यटन मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले कमिसन नपाउँदा संचालनमा आउन नसकेको स्रोतको दावी छ। सम्झौता रद्द हुने भएपछि एडिबी पनि परियोजानबाट पछाडि हटेको छ। एडिबीले पुन लुम्बिनीमा विद्युतीय बस संचालन गर्ने सम्भावना निकै न्यून छ।
हस्तान्तरण गरिसकिएको बस अब के गर्ने ? भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता उपाध्यायले निर्णय पश्चात मात्र केही हुने बताए।
‘अहिले बस राखिएको छ’, उनले भने, ‘के गर्ने विषयमा अहिले केही निर्णय भएको छैन। निर्णय पश्चात मात्रै केही हुन्छ।’
लुम्बिनी क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेश नम्बर पाँचका प्रदेशसभा सदस्य फकरुद्दिन खाँनले लुम्बिनी संचालनका लागि ल्याइएको बस लुम्बिनीमा संचालन हुन नपाउँदै सम्झौता रद्द हुनु लुम्बिनीवासीको लागि निकै दुःखद विषय रहेको बताए।
एडिबीले अनुदान सहायतामा दिएका सवारी साधनमा समान्य कमी कमजोरीलाई आफैँ सच्चाएर उपभोग गर्दा उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ।
उनले अनुदानमा आएको बसमा समान्य कमीकमजोरीलाई मर्मत गरेर चलाउनु पर्नेमा बस नै फिर्ता पठाउने जस्ता कार्य गर्दा यसले वैदेशिक अनुदानलाई हतोत्साहित गर्ने बताए।
‘एडिबीले अनुदान सहायतमा दिएको बस हो, यसमा भएका कमी कमजोरीलाई आफैँ मर्मत गरेर चलाउनु पर्छ’, उनले भने, ‘बस नै फिर्ता पठाउने जस्ता गतिविधि गर्दा यसले वैदेशिक अनुदानलाई हतोत्साहित गर्छ।’